septembre 2015 – filazantsaramada
Tanora Taratry ny Filazantsara
« Fa Kristy no anton’ny ahavelomako » Filipiana 1:21 Ny Fikambanana TTF na “Tanora Taratry ny Filazantsara” eny amin’ny Oniversite Ankatso Antananarivo dia niorina ny volana Jolay 2014. Mpianatra miisa eo amin’ny 35 avy amin’ny Sampam-pianarana maro no mandrafitra ny Fikambanana. Tany am-boalohany dia fiaraha-mivavaka isaky ny Alarobia hariva no nataon’ireo mpikambana. Miezaka ny mitory ny Filazantsara […]
Publié parfilazantsaramada septembre 29, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Tanora Taratry ny Filazantsara
« Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao sy harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano sy mangalatra. » Matio 6:20 ***Zavatra iray lehibe tsy azo adinoina ny resaka momba ny talenta omen’Andriamanitra ny olombelona ao amin’ny Soratra Masina. Ny amin’ ilay handeha an-tanilavitra ka nizara talenta tamin’ny mpanompo tsirairay ary rehefa tonga […]
Publié parfilazantsaramada septembre 25, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY ASA FANOMPOANA
Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana na « Cours Biblique par Correspondance » Ho fampahafantarana ireo sehatr’asa iandraiketany sy atolotry ny Feon’ny Filazantsara dia tsy mitsahatra ny fifandraisany amin’ireo Fiangonana na Ivontoerana samihafa izay liana sy maniry ny hiara-mifanolo-tànana amin’ny asa Fitoriana ny Filazantsara. Atoa Rakotodramanana Fitahiana, Mpitandrina ny FJKM Lovatiana Fianarantsoa (SP 25) moa dia maniry indrindra ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 23, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fampahafantarana mitohy
NY FIASAM-PAHASOAVANA EO AMIN’NY FIANGONANA.
« Dia tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. Koa raha tsy hiambina hianao, dia ho tonga toy ny fihavin’ny mpangalatra Aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hihaviako aminao. » Apok 3:3 ***Tany amboalohany Andriamanitra dia nifampiresaka mivantana tamin’ny olona noforonony. Anefa, rehefa tafalatsaka tamin’ny fahotana ny olona dia tsy nahatanty ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 18, 2015 septembre 18, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FIASAM-PAHASOAVANA EO AMIN’NY FIANGONANA.
Fankalazana ny faha 17 taonan’ny fiaraha-miasan’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana FJKM Ankadiaivo Miaramino
Nampiranty ireo “media” vokarin’ny FF ny mpianatra Katekomena Feno 17 taona no niasan-dRtoa Ramamonjy Vonimboahangy, Mpitandrina ny nitandremany ny FJKM Ankadiaivo Miaramino (SPAA 11). Ho fankalazana sy ho fanamarihana izany fotoan-dehibe izany dia nanatontosa hetsika ireo Sampana velona rehetra ao amin’ny Fiangonana ny 04-05-06 Septambra 2015 lasa teo. Fifaninanana ara-panatanjahan-tena, varotra fampiratiana ary indrindra fiaraha-mivavaka […]
Publié parfilazantsaramada septembre 16, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fankalazana ny faha 17 taonan’ny fiaraha-miasan’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana FJKM Ankadiaivo Miaramino
NY NITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA.
« Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » Jaona 13:34 ***Andriamanitra tena tia: Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanani-lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay. ***Ny toetran’ny mpanoradalàna sy ny fariseo dia hafa noho ny toetran’Andriamanitra! Inona no fanaon’ny fariseo? […]
Publié parfilazantsaramada septembre 11, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY NITIAVAN’ANDRIAMANITRA ANTSIKA.
METM Hermona Finoana Ambatobe
Alahadin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) Zava-dehibe ho an’ny Fitandremana METM Hermona Finoana Ambatobe izay iandraiketan’Atoa Rakotomalala Jean Jacques, Mpitandrina ny anjara biriky entin’ny Feon’ny Filazantsara ho fampandrosoana ny asa Fitoriana ataon’ny Fiangonana. Efa an-taonany maromaro mantsy no nanomboka ny fifandraisan’ny roa tonta tamin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) sy ny fampiasàna ireo horonan-tsarimihetsika, ho fampitomboana […]
Publié parfilazantsaramada septembre 10, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur METM Hermona Finoana Ambatobe
MAMANTATRA NY SAINA LALIN’ANDRIAMANITRA!
MAMANTATRA NY SAINA LALIN’ANDRIAMANITRA! « Fa isika tsy nandray ny fanahin’izao tontolo izao, fa ny Fanahy izay avy amin’Andriamanitra, mba ho fantantsika izay zavatra nomen’Andriamanitra antsika. » I Kor 2:12 – Ny fanahin’izao tontolo izao: Manana ny fanahy izay ao anatiny tsirairay avy ny olona, kanefa io fanahy io dia mamantatra ny ao ampon’ny olona ihany. Voafetra […]
Publié parfilazantsaramada septembre 4, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAMANTATRA NY SAINA LALIN’ANDRIAMANITRA!
Fankalazana ny faha 20 taonan’ny Vondrom-bavaky ny Fiombonan’ny Mpino Mpitsabo Kristiana (FMK) Hopitaly CHRD Itaosy
“Ny fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra” Anisan’ny manaraka ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana (FSMI) izay atolotry ny Feon’ny Filazantsara ireo mpikambana maro ao amin’ny FMK Hopitaly Itaosy Antananarivo. Nanomboka ny voalohan’ny taona 2014 izany fifandraisana nisy teo amin’ny roa tonta izany, ka Mpitsabo miisa fito no efa manaraka ny FSMI; ny telo no efa nahazo ny sertifika. […]
Publié parfilazantsaramada septembre 1, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fankalazana ny faha 20 taonan’ny Vondrom-bavaky ny Fiombonan’ny Mpino Mpitsabo Kristiana (FMK) Hopitaly CHRD Itaosy
filazantsaramada, Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.